Trip.com ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဟောင်ကောင်မှာ လူပ်ရှားနေတဲ့ - Pandaily
Trip.com ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဟောင်ကောင်မှာ လူပ်ရှားနေတဲ့
Categories: Industry ကိုGloria Li ဧပြီ 7, 2021 ဧပြီ 7, 2021 မှာ Posted
(Source: Trip.com Group)
တ႐ုတ္ခရီးသြားကုမၸဏီ Trip.com က ထုတ္ျပန္သည့္ မူၾကမ္းအရ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ခ်ိန္းဆိုၿပီး ဆင့္ပြားၾကားနာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့လက်ကမ်းစာစောင်များအင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းမှ ချိန်းဆိုတင်ပြပါ။
Trip.com နဲ့ Trip.com တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ခရီးသွားဘွတ်ကင်လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဟောင်ကောင်တို့ ပူးတွဲလူပ်ရှားနေတဲ့ Tigns & China International Co Limited (CICC) ကို စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ရွန္ဟိုင္း အေျခစိုက္ Nikkei Asia ကုမၸဏီက စီစဥ္သည့္ ေငြေၾကးစာရင္းတြင္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ေက်ာ္ရရွိသတင္းပို႔.
ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္ေနစဥ္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ စာရင္း၀င္ စာရင္း၀င္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေရွ႕အာရွ ဘ႑ာေရးစင္တာက ဆင့္ပြားေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို Trip.com တြင္လည္း ယင္းအဆင့္ရွိသူတစ္ဦး ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ Refinitiv ရဲ့ စာရင်းတွေအရဆိုရင် Alibaba ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စာရင်းဝင် ပမာဏဟာ ၁၂၉ သန်းရှိပြီး ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ဖွင့်ချိန်ကစလို့ ဟောင်ကောင်မှာ “Return Return ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ စာရင်းဝင် စုစုပေါင်း သန်း ၃၆၀ ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။သတင္းပို႔China Search Engineering ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Trip.com အုပ္စု၏ ရွယ္ယာ ၁၁.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေဟာင္ေကာင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ဆင့္ပြားေငြေၾကး ၃၁ သန္းျဖင့္ စာရင္း၀င္ခဲ့သည္။
ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းအပေါ် ကဖျက်ယဖျက် သက်ရောက်မှု များကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အသားတင် အရှုံးပေါ်သည့် ယွမ်ငွေ ၃၂.၅ သန်း (၄.၉၆၈၂ သန်း) ရှိကြောင်း Trip.com သတင်းတပုဒ်က ဆိုသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က သူ့ရဲ့အသားတင် ဝင်ငွေ ယွမ် ၁၈.၃၃၀ သန်း (၂၈.၃ သန်း) ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းOTA ဧရာမ Trip.com မွ စတင္သည့္ Global Partnership Summit တြင္ COVID-19 Recovery Story
Trip.com အဖွဲ့ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နေရာထိုင်ခင်း၊ ဘွတ်ကင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လက်မှတ်၊ ခရီးစရိတ်နှင့် ထုပ်ပိုးသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ယာဉ်လိုင်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သည်။ ၎သည္ Trip.com တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး Skyscanner, Qunar and Cools, Online Travel Agency တို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။
၂၀၀၃ တြင္ Nasdaq ကုမၸဏီက စာရင္းျပဳစုထားေသာ အေမရိကန္ Earthque Settings ေဘာက္ခ်ာကို တစ္ေစာင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၄၂၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမွာ ၇၅ သန္းအထိ ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ လလောက်က Trip.com ရဲ့ ရှယ်ယာဈေးဟာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်အထိ မြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့် တရုတ်ပြည်တွင်းခရီးသွား လုပ်ငန်းဟာ လူကြိုက်များတဲ့ အဆင့်အထိ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခရီးသွားတွေ ပြန်ဝင်လာမယ့် အလားအလာဟာလည်း တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ Trip.com ၏ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းသည္ ၁,၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၄၀,၁၈ ေဒၚလာ ပိတ္ခဲ့သည္။
အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုအရထုတ္ျပန္ခ်က္တနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်တဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဆင်ဝှာမင် အားလပ်ရက် သုံးရက်အတွင်း တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည် ၁၀၂ ဒသမ ၉၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ တစ်နှစ်ပြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသြား၀င္ေငြသည္ ၂၇၂ သန္း (၄၂ ဒသမ ၂၇၂ သန္း) အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လုံး၏ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ဝင္ေငြရရွိမည္ျဖစ္သည္။
Tags: ∗Ctrip | coronavirus outbreak | Featured | hong kong listing | hong kong stock exchange | secondary listing | Travel | Trip.com
Station B သည် 8K Ultra High Fidelity Video ကိုထောက်ပံ့ သည်
ကိုPandaily Dec6Dec6မှာ Posted
ဘူတာ B က 8K Ultra HD Video ကို ပံ့ပိုး ေပးမယ္လို႔ တနလၤာေန႔က ေၾကညာ ခဲ့ၿပီး ဒါဟာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ပလက္ ေဖာင္း ျဖစ္တဲ့ 8K Ultra HD Video ကို ေထာက္ပံ့ ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Xinhua သတင်းအေဂျင်စီ သည် ည ကောင်းကင် ယံ တွင်တရုတ် အာကာသ စခန်း ကိုပြသ သည့် ပထမဆုံး 8K ဗီဒီယို ကို ဘူတာ B တွင် တင်ခဲ့သည်။
Alie Cloud Drive သည် သိုလှောင်မှု တိုးချဲ့ မှုအတွက် စတင် အားသွင်း လိမ့်မည်ဟု ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ် နေသည်
ကိုPandaily Dec6Dec7မှာ Posted
ယခုနှစ် မတ်လတွင် Alibaba မှ တည်ဆောက် ခဲ့သော Alibaba cloud driver သည် သိုလှောင်မှု တိုးချဲ့ မှုအတွက် စတင် အားသွင်း လိမ့်မည်ဟု မကြာသေးမီက သတင်း များရရှိခဲ့သည်။
SenseTime သည် အစုရှယ်ယာ ၁. ၅ ဘီလီယံ ကိုဒေါ်လာ ၇ ၆၉. ၈ သန်းအထိ စတင် ရောင်းချ ခဲ့သည်
တရုတ် အတု ထောက်လှမ်းရေး ကုမ္ပဏီ SenseTime သည် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက် တွင်စတင် လဲလှယ် မည်ဖြစ်သည်။
လီ သီ ယမ် ဘက်ထရီ များသည် ၅-၁၅% အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀ ၂၃ ခုနှစ်တွင် စျေးနှုန်း များ မြင့်တက် နိုင်သည်
လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် နှင့်စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ၀ ယ်လိုအား မြင့်တက်လာ ခြင်းကြောင့် cylindrical lithium ဆဲလ်များ၏ စျေး နှုန်းသည် နောက် နှစ် အစောပိုင်းတွင် ၅% မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထပ်မံ မြင့်တက်လာ လိမ့်မည်ဟု ဘက်ထရီ module စက်ရုံကို အကြောင်းကြား ခဲ့သည်။
Metaverse စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင် ရန် ဘူတာရုံ B က စမ်းသပ်မှု “ UPowerChain”
တရုတ် ဗီဒီယို streaming platform B သည်၎င်း၏ "UPowerChain" ကို ကုမ္ပဏီ၏ Metaverse လုပ်ငန်း နှင့်ဆက်စပ် နေသည်။